Kunemithetho eminingana okufanele ilandelwe ekwakhiweni kwesikhunta esakha ipulasitiki - i-Aojie Mold Co., Ltd.
Imithetho eminingana okufanele ilandelwe ekwakhiweni kwesikhunta esakha ipulasitiki
Ngokuthuthuka okuqhubekayo komkhakha wezokukhiqiza waseChina, ukuthuthukiswa komkhakha kunemisebenzi eminingi yemikhiqizo yepulasitiki. Kukhona imithethonqubo eqinile ngobukhulu, ukucaciswa nokubekezelelwa kwemikhiqizo. Umklamo wepulasitiki owenza isikhunta ukuthola ukukhiqizwa kwesikhunta sepulasitiki. Njengengxenye ebalulekile yekhwalithi, abaklami kufanele baklame ngokucophelela usayizi nokucaciswa kwesikhunta, futhi bacabangele nezinkinga ezingaba khona enqubeni yokuklama neyokukhiqiza, futhi bacabangele ngokuphelele uhlelo lokuklama, ukuze kuthuthukiswe izinga lokuphumelela komklamo .
Ngakho-ke, ukwenziwa ngcono kwesikhunta sokuklanywa kwezinga kubaluleke kakhulu ekuthuthukiseni imboni yokukhiqiza epulasitiki. Njengomklami wesikhunta sepulasitiki, kuyadingeka ukuthi ubheke ngentshiseko imiqondo nezindlela ezintsha zokuklama, uhlaziye ngokucophelela izinkinga zokwakha ohlangabezane nazo, uthole izixazululo zokugwema izinkinga. Iphindiwe, thatha izinyathelo ezisebenzayo zokuthuthukisa ukusebenza kahle nobungcweti bokwakhiwa kwesikhunta, bese uxazulula inkinga, uthuthukise ukusebenza kahle kokuklama, uthuthukise ukuthembeka kwemikhiqizo yepulasitiki, uthuthukise izinzuzo zezomnotho zemikhiqizo.
Ezingxenyeni ezinokunemba okuphezulu kosayizi nokuma, abaklami kufanele baklame ngokucophelela futhi bahlangabezane nezidingo zokunemba. Isikhathi sokuklanywa nokusetshenziswa kwamandla imvamisa awekho ngaphansi kuka-p42.5; usayizi ophelele uyunifomu. Isilinganiso sezinto zikakhonkolo kufanele sibe nesizotha, futhi isilinganiso esihle kakhulu singakuthuthukisa ngempumelelo ukungangeni kokhonkolo. Ukuqhekeka okuvame ukubonakala ezakhiweni zikakhonkolo yilezi: imifantu yokushisa, imifantu yokuncipha, ukuqhekeka kokuhlala, ukuqhekeka kokuncipha nokunye. Izinga lokushisa liphezulu kakhulu ehlobo. Lapho uqinisa ukhonkolo, fafaza amanzi ngesikhathi ukuqinisekisa ukuthi ingaphezulu ligcinwa limanzi.
Izinkinga ezinkulu okuhlangatshezwane nazo ngenkathi kwenziwa ipulasitiki yokwakha isikhunta azanele ukwenza abaklami baphambuke kumklamo ojwayelekile. Enqubeni yokuklanywa kwesikhunta, abaklami besikhunta abanayo imithetho eqinile yenqubo nemithetho ecacile yokwakhiwa kwesikhunta nokukhiqizwa. Ngakho-ke, izinga lokuklama labanye abaklami alilinganiswa ngezinga elihlanganisiwe. Ngokusetshenziswa okuthe xaxa kwemikhiqizo yepulasitiki, izidingo zokunemba kwemikhiqizo yepulasitiki esetshenziswe ngezikhathi ezahlukahlukene nazo zihlukile.